China mpanamboatra asidra Fumaric sy mpamatsy | Bohua
CAS tsia: 110-17-8
Anarana hafa: Asidra Fumaric
Fonosana: 25kg / kitapo
Talantalana: Fiainana 2 taona
Fitehirizana: Voatahiry ao anaty Shielded avy amin'ny toerana maivana sy maina ary mangatsiaka
Ny asidra fumaric, fantatra koa amin'ny anarana hoe asidra fumaric, asidra fumaric, asidra purpuric na asidra lichenic, dia kristaly tsy misy loko sy mora mirehitra, asidra karboksilika azo avy amin'ny butena. Ny asidra fumaric dia mitetika toy ny voankazo ary hita ao anaty ahidrano Corydalis, Boletus, Lichen ary ahidrano Islandy.
Fonosana: 1kg / kitapo, 25kgs / amponga (Kitapo plastika roa ao anatiny sy Palah-amponga na isaky ny zavatra takian'ny mpanjifa.)
Fitehirizana: Tehirizo ao anaty kaontenera henjana sy mahazaka hazavana, aza ialana amin'ny tara-pahazavana mivantana, ny hamandoana ary ny hafanana be loatra.
Fiainana talantalana: 24 volana.
Afaka nanolotra kitapo namboarina ihany koa izahay araka ny takian'ny mpanjifa
Manisy fatra: 23mts / 20'FCL (tsy misy paleta)
Fatra: 1.22cbm / mt 28cbm / 20'FCL
Fotoana fandefasana: ao anatin'ny 10 ~ 20 andro aorian'ny nahazo ny prepayment an'ny mpanjifa sy ny LC tany am-boalohany.
1) Ny asidra Fumaric dia azo ampiasaina ho asidra miteraka.
2) Ny asidra Fumaric dia misy fiasan'ny bakteriaostatika sy antiseptika. 3) Ny asidra Fumaric dia azo ampiasaina ho mpandrindra asidra, mpametaka, manohitra ny fanampiana fanampiny, manasitrana haingana sy zava-manitra.
4) Ny asidra Fumaric dia azo ampiasaina ho toy ny asidra misy akora entina manara-penitra, afaka mamokatra miboiboika lava sy mahafinaritra izy io.
5) Ny asidra Fumaric dia azo ampiasaina ho toy ny mpitsabo mpanelanelana mpanelanelana sy mpitsindroka optika.
6) Ny asidra fumarika dia ampiasaina koa amin'ny famokarana resina polyester tsy miangona.
7) Amin'ny indostrian'ny pharmaceutika dia ampiasaina hamokarana sodiumiphercic sodium dimercaptosuccinate sy ferumus fumarate.
(1) Amin'ny indostrian'ny sakafo: azo ampiasaina amin'ny fikarakarana sy fifangaroana zava-pisotro, liqueur, ranom-boankazo ary fanamboarana vatomamy sy jam sns. Misy vokany koa amin'ny fihenan'ny bakteria sy ny antisepsis ary afaka manala tartrate mandritra ny famokarana divay.
(2) Amin'ny indostrian'ny paraky: ny tsiranoka asidra malika (toy ny esters) dia afaka manatsara ny fofon'ny paraky.
(3) Amin'ny indostrian'ny pharmaceutika: ny troches sy syrup mifangaro asidra malic dia misy tsirony voankazo ary afaka manamora ny fitrohana azy ireo sy ny fanaparitahana ao amin'ny vatana.
(4) Indostria simika isan'andro: amin'ny maha-agents manahirana tsara azy, dia azo ampiasaina amin'ny raikira fametahana nify, ny ra famolavolana synthesie spice sns. Izy io koa dia azo ampiasaina ho toy ny deodorant sy ny detergent. Raha ampiana sakafo, asidra malika dia akora ilaina amin'ny sakafom-pihinananay. Amin'ny maha-mpanampy sakafo mpamatsy sakafo sy mpamatsy sakafo any Shina anay dia afaka manome anao malika avo lenta izahay.
IREO SINGA NASIANA famaritana vokany
Bika Aman 'endrika POWDER SAINA Fotsy mifanaraka
ASSAY (MOMBA NY ASA MAINGA) 99,5 --- 100,5% 99,93%
ARSENIKA (As) ≤1PPM <1PPM
HAMPIDIRANA ≤2PPM <2PPM
RESIDUE ON IGNITION ≤0.05% 0,021%
RANO ≤0.5% 0.19%
COLOR (Pt-Co) ≤15 # 12 #
Asidra lahy ≤0.1% 0,022%
TOROHEVITRA MELTING 286 ~ 302 ° C 298 ° C
Solfata ≤0.01% 0.005%
IREO SINGA NASIANA Fanondroana vokany
sahy miteny ≥99.0% 99,55%
harato MANORANA 300 MESH 100%
ARSENIKA (As) PP3PPM <1PPM
METALY MAvesatra (Pb) ≤10PPM <5PPM
RESIDUE ON IGNITION ≤0.1% 0,027%
RANO ≤0.3% 0.19%
COLOR (Pt-Co) F15 Hazen 12 Hazena
TOROHEVITRA MELTING 286 ~ 289 ° C 289 ° C
SOLUBILITY (25 ° C) Rano ≥1.00g / 100ml Rano 1.03g / 100ml
Fampisehoana sary amin'ny orinasa
Fampisehoana sary lojika
Teo aloha: DL-Malic Acid
Manaraka: Acidity Regulator BP98 Powder kristaly 99% min Sodium Citrate
Kilasy Sakafo Asidra Fumaric
Fumaric Acid Plant
Vidin'ny asidra Fumaric
Mpamatsy asidra Fumaric